Tahina Razafinjoelina: « Tsy azo atao takalonaina Antananarivo »
vendredi, 02 août 2019 09:01
« Tokony hiara-hiasa ny mpitantana ny tanàna sy ny mpitantana ny firenena, diso hevitra raha maka fahavalo ny mpitantana ny tanàna ny mpitondra. Tsy azo atao takalonaina Antananarivo ! », hoy ny fanehoan-kevitr’i Tahina Razafinjoelina raha nivahiny tao amin’ny onjam-peo tsy miankina Top Radio, eto Antananarivo omaly maraina.
« Antananarivo dia Madagasikara », hoy hatrany ity filoha nasionalin’ny antoko Tia Tanindrazana ity, ka « raha izay Ben’ny tanàna tonga eo no atao antsojay dia potika ity tanàna ity ». « Aza avahana intsony Antananarivo sy ny faritra, aoka izay ny filazana faritra iva sy faritra ambony sy ny fanavahana ara-pihaviana sy ara-pinoana », hoy izy.
« Raha te hampandroso isika dia mila firaisankina », hoy i Tahina Razafinjoelina ka « aoka izay ity zarazarao anjakana ity ». Nampahatsiahy izy nandritra io fivahinianany tamin’io onjam-peo io fa anisan’ny tarigetran’ny antoko Tia Tanindrazana tarihiny ny « fanabeazana sy fihavanana », ny « fitsinjaram-pahefana » ary ny « nomerika ».
Mikasika ny fiatrehana ny fifidianana Ben’ny tanàna ho avy, dia « ny antoko no manapa-kevitra ny amin’izay » hoy i Tahina Razafinjoelina, satria « aminay ny politika dia itambaran’ny olona maro ny hevitra fa tsy an’ny mpitantana irery. Ary ny politika dia hevitra entina ampandrosoana ny olona, ny firenena ».
Ho an’ny antoko Tia Tanindrazana, hoy i Tahina Razafinjoelina dia « miainga amin’ny vina ny tena fampandrosoana fa tsy ny fampandaniana amin’ny fomba rehetra ny kandida rehetra atolotry ny antoko iray, ilazana fa antoko matanjaka ».
Antoko niforona tamin’ny 07 desambra 2010 ny antoko politika Tia Tanindrazana, ary niorina ara-panjakana voarakitra amin’ny firaketan’ny ministeran’ny Ati-tany tamin’ny 18 aprily 2013.